Microsoft Office Software အစုံအလင်ရှိတယ်နော် ~ The ICT.com.mm Blog
Microsoft Office Software အစုံအလင်ရှိတယ်နော်
Microsoft Office Software တွေဟာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအတွက် မရှိမဖြစ်ပါ။ ဒီလိုမရှိမဖြစ် လုပ်ငန်းသုံး Microsoft Office Software လေးတွေကိုလည်း မှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလေးတွေကတော့
1. Microsoft Office 2019 Professional Plus
2. Microsoft Office 365 Personal
3. Microsoft Office 365 Home
4. Microsoft Office Home & Student 2019 နဲ့
5. Microsoft Office Home & Business 2019 တို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။
အကြိုက်ဆုံး Software ကိုရွေးချယ်ဖို့ လင့်ခ်လေးလည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Microsoft Office ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Performance ကို ပြသလိုက်ပါနော်။
Order now » https://bit.ly/3CBy5ww
#ShopICT #Myanmar #1OnlineTechRetailer #Software #microsoftoffice
Newer ချစ်ရတဲ့သူတွေကို “ခြင်”အန္တရာယ်ကနေ ကင်းဝေးစေဖို့
Older အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံးအတွက် ဈေးနှုန်းသင့် Keyboard, Mouse, Webcam နဲ့ Headphone လေးတွေ ရှာနေတယ်ဆိုရင်